Takian’i Jordania ny tany ‘nampanofaina an’Israely’ araka ny fifanarahana fandriampahalemana 1994 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2018 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Français, Español, Português, українська, English
Andro fahatsiarovana tao Baqoura/Naharayim. Sary avy amin'i Yoavd azon'ny rehetra ampiasaina. Loharanon-tsary: Wikipedia.
Nankasitrahan'ny Jordaniana, izay niantso izany ho “fandresena ara-tantara” ny fanapahan-kevitry ny mpanjaka Jordaniana Abdullah II hanafoana ny ampahany amin'ny Fifanarahana Fandriampahalemana Wadi Araba, mba hamerenana amin'i Jordania ireo faritra maromaro misy ny tany nampanofaina an'i Israely.
Efa ela ny Jordaniana no nanondro ny tanin'i Baqoura (Naharayim amin'ny teny hebreo) sy Ghumar ho “tany Jordaniana nampanofaina tamin'i Isiraeliana” araka ny fifanarahana fandriampahalemana Israeliana-Jordaniana tamin'ny taona 1994. Nandritra ny resadresaka tamin'ny TV March nifanaovana tamin'ny praiminisitra sy ny lehiben'ny mpanelanelana ny fandriampahalemana Abdel Salam Majali, nanambara izy fa “tanin'ny Israeliana (olon-tsotra) eo ambany fiandrianana Jordaniana ireo”, ka nanafintohina ny Israeliana sy ny Jordaniana.
Nandinika indray ireo fepetra voalaza ao amin'ny fifanarahana fandriampahalemana ny olom-pirenena Jordaniana, ny antoko politika sy ny olo-malaza ao amin'ny parlemanta ary nanamafy fa ireo voalaza mikasika ny faritra roa dia tsy milaza ny teny hoe “hofaina” na dia eo aza ny fomba fijerin'ny vahoaka.
Ny fifanarahana fandriampahalemana, raha ny marina, dia mametraka ny tanin'i Baqoura sy Ghumar eo ambany “fitsipika manokana” eo amin'ny firenena roa tonta mandritra ny 25 taona, ary tapitra amin'ny volana Oktobra 2019. Midika ny fifanarahana fa tsy iharan'ny lalàna mifehy ny fadin-tseranana sy ny fifindramonina ireo faritra ireo. Nanome ho an'i Israely ny zo tsy voafetra hivezivezy sy ho tompony ihany koa izany.
Raha toa ka tsy te hanavao ny fepetran'ny fifanarahana ny firenena roa tonta, dia tsy maintsy mampilaza herintaona mialoha ho an'ny hafa mikasika ny fikasany izay hanao izany, raha tsy izany mihavao ho azy ny fepetra.
Nahatezitra ny vahoaka ny fanambarana natao tamin'ny volana Martsa, izay nieritreritra fa ny fampiasana tsy tapaka ny teny hoe “fanofana” rehefa miresaka momba ny olana tamin'ny taona lasa dia “fikasana iniana hamitahana ny vahoaka”, hoy ny filohan'ny Filan-kevitry ny Fikambanana Matihanina, Ibraheem Tarawneh nanamafy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Tarawneh nilaza hoe:
Nofitahana izahay mba hieritreritra fa fanofana hifarana afaka 25 taona izany, saingy fantatray ankehitriny fa tsy misy ny fanofana, ka raha ny marina, dia tao anatin'ny fibodoana sy fanararaotan'ny Israeliana izahay nandritra ireo fotoana izao.
Nandany ny fito volana manaraka ny vahoaka Jordaniana nitaky fanambarana mazava avy amin'ny governemanta mikasika ny fe-potoana akaiky ho an'ny fanambarana tsy maintsy ataon'i Jordania raha mikasa hamarana ny fepetra izy.
Noho ny governemanta mandà tsy haneho hevitra momba io olana io, ary andro efatra sisa alohan'ny fe-potoana farany hanaovazana ny fepetra, nidina an-dalambe ireo mpikatroka Jordaniana tamin'ny 19 Oktobra 2018 mba haneho ny fanoheran'izy ireo ny fanavaozana, izay antsoin'izy ireo hoe ” zavatra mahamenatra nanenjika ny vahoaka Jordaniana hatry ny ela.”
Roa andro taorian'ny hetsi-panoherana, navoaka tamin'ny alàlan'ny Twitter ny fanambaran'ny Mpanjakan'i Jordana hanafoana ny fepetra ao amin'ny fifanarahana momba an'i Baquoura sy Ghumar, manamarika fanehoan-kevitra tsara avy amin'ny Jordaniana manerana ny Fanjakana izay nanahy ny fahanginan'ny governemanta momba io raharaha io.
Baqoura sy Ghumar no teo an-tampon'ny laharam-pahamehantsika. Ny fanapahan-kevitray dia ny hampitsahatra ny fepetra Baquoura sy Ghamar avy amin'ny fifanarahana fandriampahalemana (Jordania-Israely taona 1994) noho ny fikasanay handray fanapahan-kevitra hanompo an'i Jordania sy ny Jordaniana.
Mbola tsy namoaka dingana manaraka momba ny famerenana ny tany ny governemanta, saingy maminavina ireo mpanao fanadihadiana ara-politika fa raha momba ny tany Baqoura – an'(olon-tsotra) Isiraeliana, dia tsy maintsy mividy izany any amin'ny tena tompony ny governemanta.
Ho an'i Ghumar, hofoanana ny fifanarahana ny “fitsipika manokana”, fa mamerina fotsiny ny tany ho any amin'ny fiandrianana Jordaniana ary mametraka indray ny fehezan-dalàna toy ny fifindra-monina sy ny fadin-tseranana tsy hita tamin'ny fifanarahana.
Taorian'ny fanambaran'ny Mpanjaka, nisioka io andro io ihany koa ny Praiminisitra Isiraeliana Benjamin Netanyahu:
Hiditra amin'ny fifampiraharahana amin'i Jordania mikasika ny mety hisian'ny fanitarana ny fifanarahana efa misy isika. Saingy tsy misy isalasalana fa, manome tombontsoa lehibe sy sarobidy ho an'ny firenena roa tonta ny fifanarahana.
Tsy nisy fifanakalozan-kevitra hafa avy amin'ny lafiny iray taorian'ny siokan'i Netanyahu, na dia nanomboka niely aza ny tsaho fa hanafoana ny famatsian-dranony ho an'i Jordania i Isiraely. Nolavin'ny governemanta Jordaniana avy hatrany izany tsaho izany.